Activités Jour | Grandir à Antsirabe
Ny hetsika andavanandro dia atao eny amin’ireo fokontany sahirana, eto Antsirabe mba hahafahan’ireo ankizy eny amin’ny lalana (enfants dans la rue) rehetra misitraka, izany dia mifindra toerana isaky ny erinandro. Ankoatry ny fanomezana sehatra ho an’ny kolontsaina sy ny fialalam-boly, ny hetsika andavandandro ihany koa dia manome lanja ny fanabeazana.
Isaky ny Talata tolakandro, ny hetsika DanselaRue dia manome sehatra an’ireo ankizy ahafahany mivelatra ara-batana : io no fotoana iray ahafahan’izy ireo miala voly sy mandihy!
Isaky ny Alakamisy indray dia manatona ny ankizy ny boky : BiblioPousse, posy namboarina ho toy ny tranom-boky, izay mandeha eny amin’ny toeram-ponenan’izy ireo eny. Ahitan’izy ireo tantara vaovao hatrany sy hahafany mamaky teny. Eto ihany koa no hahafahany mianatra izany fahaiza-miaina izany (fahaiza-mihaino sy fahalalam-pomba) ao ko ny fahadiovana, satria, tsy maintsy ny fanasana tanana foana no anombohana ny fotoana.
Ho famaranana ny erinandro kosa dia tsara raha asiana fijerevana horonan-tsary kely! Isaky ny Zoma hariva no misy ny CinéRue : fotoana iray ijeren’ny ankizy sary miaina na sary mihetsika Malagasy na koa horonan-tsary fanadihadiana.
Malaza eto Antsirabe ny Hetsika andavanandro ary entina hampahafantarana amin’ny ankizy sy ny vahoaka ny mombamomba ny fikambanana sy ireo asa maro samihafa ataony.